कस्तो छ, नवग्रहसंग नवरात्रमा पुजा गरिने नौ देवीको सम्बन्ध? जान्नुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
कस्तो छ, नवग्रहसंग नवरात्रमा पुजा गरिने नौ देवीको सम्बन्ध? जान्नुहोस् !!
विजयादशमीको दिन भगवतिले दानवी शक्तिमाथी र रामले रावनमाथी विजय हासिल गरेको उपलक्ष्य र खुसीयालीमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरुप रातो टिका र जमरा लगाउने चलन छ । देवीको दर्शनका लागि विभिन्न मन्दिरहरु जान्छौं । नवदूर्गाको पूजाको आफ्नै विधि–विधानहरु छन् । हरेक देवीका रुपको आफ्नै छुट्टै महत्व रहेको छ ।
शैलापुत्री – देवी शैलपुत्री देवीका नौ रुपहरु मध्येकी प्रथम रुप हुन् । उनको पूजा गर्दा चन्द्रमासँग सम्बन्धित दोष समाप्त हुने विश्वास छ ।
ब्रह्मचारिणी – देवी ब्रह्मचारिणीको पूजाले मंगल ग्रहको नराम्रो प्रभाव हटाउँछ ।चन्द्रघण्टा – देवी चन्द्रघण्टाको पुजाले शुक्र ग्रहको प्रभाव कम हुन्छ ।
कुष्मान्डा – देवी कुष्माण्डाको पूजाले सूर्यको नराम्रो प्रभाबबाट जककगाउँछ ।स्कन्दमाता – देवी स्कन्दमाताको पूजाले बुध ग्रहको नराम्रो प्रभाव कम हुन्छ ।कात्यायनी – देवी कात्यायनीको पूजा गर्नाले बृहस्पतिको नराम्रो प्रभाव कम हुन्छ ।कालरात्रि – देवी कालरात्रिको पूजाले शनिको नराम्रो प्रभाव कम हुन्छ ।
महागौरी – देवी महागौरीको पूजा गर्नाले राहुको नराम्रो प्रभाव कम हुने विश्वास छ ।सिद्धिदात्री – देवी सिद्धिदात्रीको पूजा गर्दा केतुको नराम्रो प्रभावलाई कम गर्न मद्दा पुग्दछ ।
आज नवरात्रको दोस्रो दिन अर्थात माता ब्रह्माचारिणीको पूजा अर्चना गर्ने दिन । नवदूर्गाहरुमध्ये भक्तहरुलाई सिद्ध र अनन्त फल दिने देवी नै ब्रह्मचारिणी देवी हुन् ।ब्रह्मचारिणीको अर्थ हुन्छ जो असीम अनन्तमा विद्यमान वा गतिमान छ । तपको आचरण गर्ने देवी नै ब्रह्मचारिणी हुन् । स्वरुपको आधारमा भन्दा दाहिने हातमा जपको माला एवं बायाँ हातमा कमण्डलु लिएकी देवी ब्रह्मचारिणी देवी हुन् ।
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 44 = 46